﻿ ‘प्रदेश र केन्द्रले समेत वडामा योजनाको लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ’
देशभर एकैदिन थप ३७ सय ९० जनामा कोरोना पुष्टि, १८ जनाको मृत्यु
देशभर एकैदिन थप २९ सय ४२ जनामा कोरोना पुष्टि, १२ जनाको मृत्यु
देशभर एकैदिन थप ३१ सय ६७ जनामा कोरोना पुष्टि, १२ जनाको मृत्यु
बडा दशैं सुरु, आज घटस्थापना
सुनसरीमा आइतबारदेखि जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने
देशभर थप ४३ सय ९२ जनामा कोरोना पुष्टि, २१ जनाको मृत्यु
शनिबार १०, असोज २०७७
यतिबेला देश नै कोभिड–१९ को चपेटामा परेको बेला सुन्दरहरैचाको वडा नम्बर १२ मा कसरी यसको नियन्त्रण गरियो, यसपालिको बजेटलगायतका विषयहरुमा वडा अध्यक्ष रोशन प्रसाद ढकालसंग हामीले कुराकानी गरेका छौं । यस्तो छ न्युजलयका लागि ज्योती पोख्रेलले गरेको कुराकानीः
वडाको काम र कोरोना व्यवस्थापनको कार्यमा व्यस्त छु ।
अहिलेसम्म राम्रै भईरहेको छ, तर अपेक्षा गरेअनुसारको विकास हुन सकिरहेको छैन ।
विगतका समयमा के कस्ता समस्याहरु वडामा आउने गर्थे र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो सुन्दरहरैचाको वडा नम्बर १२ खेतीयोग्य जमिन कम र मानव बस्ती अलिक बढी रहेको छ । त्यसैले ढलको समस्या समेत रहेको छ । धेरै बस्तीहरु भएकाले सानो र छोटो दुरीका बाटोहरु धेरै रहेको हुँदा बाटोको समस्या सबै भन्दा धेरै रहेको छ ।
यो पटकको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा युवाहरुको लागि के–कस्ता सेवा–सुविधाहरु समेट्नु भएको छ ?
अहिले वडामा सिमित र थोरै बजेट हुन्छ । त्यसमा युवाहरुलाई खेलकुदको लागि सिमित बजेट छुट्याइएको हुन्छ । महिलाहरुको लागि पनि विभिन्न सिपमुलक तालिम, गोष्ठीहरु सञ्चालनका लागि कार्यक्रमहरु छुट्याइएको हुन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा के–कस्ता विकासका कामहरु भए र आगामी दिनहरुमा विकासका लागि कस्तो प्रकारको योजना छनोट भएका छन् ?
हाम्रो वडा पहिला इन्द्रपुर गाविस थियो, त्यो भन्दा पहिले हरैंचा गाविस थियो । हरैंचा गाविसबाट छुटेर इन्द्रपुर बनेको हो । इन्द्रपुर बनिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधार बनाउनपर्ने, स्कुल कलेजहरु पहिले नै खुलिसकेका छन् । विगतको भन्दा पछिल्लो समय सुधार हुँदै आएका छन् । अहिले पनि सुरक्षाका विषयमा जोड दिएका छौं । धेरै मानव बस्ती भएपछि विभिन्न प्रकारका घटनाहरु हुन सक्छन् । त्यसबाट कसरी सुरक्षित हुने कुरामा जुटिरहेका छौं । आउँदो दिनहरुमा पनि बाक्लो बस्ती भएका कारण सिर्जना भएको ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरु माग भईरहेका छन् । र त्यही अनुसार सुधार हुँदै आईरहेका छन् ।
वडाबासीहरुबाट आउने गरेको मुद्दा मामिला सम्बन्धि समस्याको अवस्था कस्तो छ ?
पहिले जग्गाको सिमा विवाद, श्रीमानश्रीमती बीचको विवाद जस्ता समान्य विषयहरु नै आउँथे, अहिले सबभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरु आउन थालेका छन् । समाज विकास हुँदै जाँदा एकअर्काको अधिकारको विषयले पनि होला, समाजको संरचना पनि त्यही अनुसारको विकास भईरहेको छ । सम्बन्ध विच्छेद तथा महिलाबीचको झगडाको तुलनामा सिमा विवादको समस्या कम रहेको छ ।
वडाको विकासको लागि तपाईले कोसँग अथवा कुन निकायसँग आग्रह गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो तल्लो तहको सरकार वडामा बजेट सिमित रहेको हुन्छ । नगरपालिकाले छुट्याएको निश्चित बजेटको आधारमा हामीले हाम्रो योजनाको कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तर समुदायका मानिसहरु ठूलाठूला अपेक्षासहित वडाकार्यलयमा आउनुहुन्छ । त्यसको लागि बजेट विनियोजन तथा याजना निर्माणको क्रममा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले पनि त्यही अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ र हामीले पनि पहल गरिरहेकै हुन्छौं ।
अहिले तीन तहको सरकार छ । प्रदेश सरकारले पनि वडालाई नै उत्तरदायी बनाउने र केन्द्रीय सरकारले पनि त्यही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । वडामा सा–साना योजना हुनुका साथै दीर्घकालिन महत्वका योजना पनि हुन्छन् । ती योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले हेरिरहेको हुन्छ तर पनि कहिलेकाहि हामीसँग धेरै कामहरु हुन्छन् । त्यसमा हाम्रो बजेटले भ्याइनरहेको अवस्था हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रले पनि साना योजनाहरुमा समेत सिमित बजेट छुट्याइदिने हो भने राम्रो हुनेछ ।
कोभिड–१९ को अवस्था र लकडाउनको पनि दोस्रो चरण भइसक्यो, यो अवस्थामा वडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
कोभिड–१९ बाट विश्व नै अक्रान्त बनेको अवस्था थियो । यो के हो भन्ने कुरामा संसारले ठोस रुपमा भन्न नसकिरहेको कुरा हाम्रो मुलुकले भन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यसबीचमा धेरै मानिसहरु डरत्रासमा थिए । उनीहरुलाई घरमा नै बस्न अनुरोध गर्यौं । समाचारमा प्रकाशित भएका विषयवस्तु तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना गर्दै जनतासम्म जनचेतना फैलायौं । नगरपालिकाले पनि हाम्रो वडाबाट विदेशमा रहनुहुने कति छन् ? भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्यौं । छिमेकी वडाहरुमा र हाम्रो वडामा विदेशबाट आउन सक्ने नागरिकहरुको तथ्याङ्कको आधारमा क्वारेन्टाइनको व्यावस्थापन गरेका थियौं ।
हाम्रो वडा नजिक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आइशोलेसनको व्यवस्था थियो । त्यसमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दियौं । मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने र विदेशबाट आउनेहरुलाई व्यवस्थित ढंगले त्यहाँ राख्यौं । पसीआर परीक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने व्यवस्थाको कारणले पनि सुन्दरहरैंचामा समग्र अरु स्थानीय तहको तुलनामा कम संक्रमित भए । हाम्रो वडामा पनि दुई देखि तीन सय सम्मलाई परीक्षण गर्दा समुदाय स्तरमा कुनै संक्रमित फेला परेका छैनन् तर विदेशबाट आउनेहरु मध्ये केहीमा संक्रमण देखा परेका छन् । यो माहामारी संसार भर फैलिएको र देशै जोखिम अवस्थामा हुँदा समेत वडाका गरिब तथा मजदुरहरुका लागि राहातको व्यवस्था गर्यौं । त्यसको लागि स्थानीय सरकारले भ्याएसम्म र व्यक्तिगत तथा छिमेकमा रहेका गरीब, मजदुर वर्गका लागि सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्यौं । कोरोनाको विषम परिस्थितिमा हाम्रो वडाका आम वडाबासीले उद्धार भावनाले अगाडी बढ्नु भएको कारणले पनि अन्य वडाको तुलनामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्यौ भन्ने लाग्छ ।
वडामा कर्मचारीहरुबाट के–कस्तो सहयोग मिलेको छ ?
वडा कार्यलयमा कार्य सम्पादनको लागि कर्मचारीहरुबाट कुनै किसिमको समस्या छैन । वडामा आर्थिकको विषयवस्तु नहुने र छनोट भएका योजनाहरु समुदायबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्ने की टेन्डरबाट लाने हो भन्ने विषय नगरपालिकाबाटै निष्कर्ष निकालिएको हुन्छ । वडाका अधिकांश योजनामा नकसा जारी भएको हुँदा त्यसअनुसार काम गर्दा वडा कार्यलयमा समस्या छैन । वडाका कर्मचारीहरु वर्षमा दुईपटक सम्म परिवर्तन हुँदा समेत त्यस्तो कुनै प्रकारको समस्या भएको महसुस भएन । कर्मचारी जो आएपनि वडाको काम गर्ने हो । काम गर्ने क्रममा मिलेर गर्न सकिएन भने जनताले आक्रोश पाख्ने गर्छन् । त्यसकारणले पनि एकता कायम छ ।
सरकारले के कस्तो व्यवस्था गर्दिए वडाको विकास चाडो हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
स्थानीय तहमा विकासको लागि महत्वपूर्ण निकाय वडा हो भनेर प्रचार गरिए अनुसार छैन । वडामा रहेका ५ जना जनप्रतिनिधिले मेरो वडाको विकास यसरी गर्छु भनि निर्णय गरेर हाम्रो योजना लागू हुँदैन । वडाको विकासको लागि स्थानीय बुद्धिजिवी, संघसंस्था प्रतिनिधिहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार योजनाको छनोट गर्नुपर्छ । मेरो वडाको विषयमा म जति जानकार छु, वडाका बासिन्दा जति जानकार हुनुहुन्छ त्यति अरु वडाको मान्छे जानकार नहुन सक्छ । त्यसैले पनि वडालाई सबभन्दा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा वडाबासीहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
अहिले हामी तेस्रो कार्यकाल पुरा गरेर चौथो कार्यकालमा छौं । यहाँसम्म आइपुग्दा जुन सदभाव देखाइ दिनुभयो, जुन किसिमको विकासमा चासो देखाइ दिनुभयो त्यसको लागि उहाँहरुलाई विशेष धनयवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरुमा पनि यो अपेक्षा गरिरहने छु । यो वर्ष विशेष गरि कोभिडको कारणले गर्दा आर्थिक रुपमा सरकार साथै हामी जनसमुदाय त्यसको चपेटामा छौं । यो अवस्थामा हामी एकअर्काबीच सहयोगको भावना विकास गरौं र त्यही ढंगले उहाँहरुले पनि सोचिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु ।
‘औद्योगिक मजदुरहरुलाई तालिम दिएर श्रम क्षेत्रमा पठाउने योजना छ’
मटर तस्करी रोक्दा घरेलु हतियारले हानेर असई र जवानको हत्या
जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराई चयन
उदयपुरमा मेयरसहित ४ जनामा कोरोना पुष्टि
निर्माणाधीन हाईड्रोमा स्थानीयको अवरोध